Cheta Nwunye Lọt na Ogidi Nnu | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Cheta Nwunye Lọt
Lọt na nwanne nna ya aha ya bụ́ Ebreham biri na Kenan. Ha mechara nwee ọtụtụ atụrụ na ehi nke na ebe ahụ abachaghị ha. Ebreham gwara Lọt, sị: ‘Mụ na gị agaghịzi ebi otu ebe. Biko, họrọ ebe ị ga-ebi, ị gaa n’aka ekpe, m ga-aga n’aka nri.’ Ihe a Ebreham kwuru gosiri na ọ naghị achọ ihe ga-abara naanị ya uru. Ọ̀ bụghị eziokwu?
Lọt hụrụ ebe mara mma n’ala ahụ. Ọ dị nso n’ebe a na-akpọ Sọdọm. Mmiri na ahịhịa ndụ juru n’ebe ahụ. N’ihi ya, ọ họọrọ ebe ahụ ma kpọrọ ezinụlọ ya gaa biri na ya. Ha mechakwara gaa biri na Sọdọm.
Ndị Sọdọm na ndị Gọmọra bụ ndị ọjọọ. Ha na-eme ihe jọgburu onwe ya nke na Jehova kwuru na ya ga-ebibi obodo ha. Ma, Chineke achọghị ibibi Lọt na ndị ezinụlọ ya. N’ihi ya, o zipụrụ ndị mmụọ ozi abụọ ka ha gaa gwa ha okwu. Ha gwara Lọt, sị: ‘Meenụ ọsọ ọsọ. Sinụ n’obodo a gbapụ. Jehova na-aga ibibi ya.’
Lọt ahapụghị Sọdọm ozugbo. Ọ nọ na-egbu oge. N’ihi ya, ndị mmụọ ozi ahụ jidere ya na nwunye ya na ụmụ ya nwaanyị abụọ n’aka ma kpọpụ ha n’obodo ahụ. Ndị mmụọ ozi ahụ gwara ha, sị: ‘Gbapụnụ n’ihi ndụ unu. Unu elela anya n’azụ. Unu lee anya n’azụ, unu ga-anwụ.’
Mgbe ha rutere n’obodo a na-akpọ Zoa, Jehova mere ka sọlfọ na ọkụ si n’eluigwe zokwasị Sọdọm na Gọmọra. Jehova bibiri obodo abụọ a kpamkpam. Mgbe nwunye Lọt nupụụrụ Jehova isi ma lee anya n’azụ, ọ ghọrọ ogidi nnu. Ma o nweghị ihe mere Lọt na ụmụ ya nwaanyị abụọ maka na ha rubeere Jehova isi. Ọ ga-abụ na obi jọrọ ha ezigbo njọ na nwunye Lọt nupụụrụ Jehova isi. Ma obi tọkwara Lọt na ụmụ ya nwaanyị abụọ ụtọ na ha rubeere Jehova isi.
“Chetanụ nwunye Lọt.”​—Luk 17:32
Ajụjụ: Gịnị mere Jehova ji bibie Sọdọm na Gọmọra? Gịnị mere nwunye Lọt ji ghọọ ogidi nnu?
Kaadị Akụkọ Lọt
Danloduo kaadị akụkọ Baịbụl a ma were ya mụọ banyere nwa nwanne Ebreham aha ya bụ Lọt.